Seranam-piaramanidina Sheremetyevo ao Moskoa: fepetra tsy mbola nisy toa izany mba hiparitahan'i COVID-19
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Seranam-piaramanidina Sheremetyevo ao Moskoa: fepetra tsy mbola nisy toa izany mba hiparitahan'i COVID-19
SIA JSC, mpitantana ny Moskoa Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sheremetyevo, dia mandray fepetra tsy mbola nisy toa azy hisorohana ny fanafarana sy ny fiparitahan'ny Covid-19 aretina ao amin'ny faritry ny Federasiona Rosiana.
Ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo dia manaraka akaiky ny torolàlana rehetra sy ny tolo-kevitry ny foibem-pitsaboana vonjimaika an'ny governemanta Rosiana miadidy ny fisorohana ny fanafarana sy ny fanaparitahana ilay virus coronavirus any amin'ny faritry ny Federasiona Rosiana, izay eo ambany fitantanan'ny praiminisitra lefitra T. Golkova.
Miantoka fa tsy lasa teboka fampidirana tranga COVID-19 vaovao ny seranam-piaramanidina Rosia ary ny fiarovana ny fahasalaman'ny mpandeha sy ny mpiasa no laharam-pahamehana amin'ny seranam-piaramanidina.
Noho ny fihenan'ny fifamoivoizana ataon'ny mpandeha sy ny fameperana vaovao napetraka amin'ny dia iraisam-pirenena, dia hakatona ny terminal E sy C na ny fiaingany na ny fahatongavany amin'ny March 20, 2020, at 12: 00 am Ny sidina rehetra miasa amin'ireto terminal ireto dia hafindra mankany amin'ny Terminal D sy Terminal F.
Sheremetyevo International Airport no seranam-piaramanidina voalohany ao Rosia hanomboka fampiharana andiany fepetra hisorohana ny fihanaky ny COVID-19. Hatramin'ny andro voalohany tamin'ny fandrahonana ny aretina dia miparitaka any amin'ny faritanin'i Rosia, sidina rehetra tonga avy Shina dia naterina nankany amin'ny Terminal F, ary ny sidina avy any amin'ny Repoblikan'i Korea, Iran, ary Italia avy eo nateraka tany amin'io terminal io ihany koa. Amin'izao fotoana izao, ny terminal dia manompo ny sidina rehetra tonga avy any amin'ny firenena miaraka amina tranga COVID-19 marobe. *
Ireo mpandeha rehetra tonga ao amin'ny Terminal F dia manaraka fizahana ara-pahasalamana. Ny fepetra fisorohana dia manomboka eo amin'ny fiaramanidina, izay manamarina ny toetran'ny mpandeha ny tompon'andraikitra amin'ny Serivisy fanaraha-maso ny mpanjifa federaly amin'ny alàlan'ny fakan-tsary fakan-tsary lavitra. Ny fanaraha-maso henjana indrindra dia natao teo am-pivoahana avy teo amin'ny lalamby ho an'ny mpandeha mankamin'ny faritry ny fahatongavana niaraka tamin'ny fakantsary fakana sary mihetsika mafana. Ny fizahana farany dia tanterahina ao amin'ny faritra fanangonana entana ataon'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana Moscow, ny Minisiteran'ny fitsaboana ara-pahasalamana ao amin'ny Oblast ao Moskoa, ny Sampan-draharaha misahana ny fanaraha-maso ny mpanjifa federaly ary ny sampan-draharaha ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana an'ny SIA JSC.
Ny mari-pana dia alaina ho an'ny mpandeha sy ny ekipazy rehetra tonga ao Moscow, ary ny santionany biolojika dia nangonina ho an'ny fitsapana manaraka ho an'ny COVID-19. Ny fahatongavana rehetra dia tsy maintsy mameno ihany koa ny toe-batana misy azy ireo sy ny dia nataony farany teo.
Ny mpitsabo koa dia mandinika tsara ny mpandeha mba hahitana famantarana ny aretina. Ireo mpandeha izay tratry ny tazo na miaraka amin'ny soritr'aretina sery na toy ny gripa dia entina any amin'ny paroasy mitokana ao amin'ny tobin'ny tobin'ny seranam-piaramanidina ary avy eo mankany amin'ny hopitaly manampahaizana manokana amin'ny fitsaboana aretina azo. Misy ekipa mpitsabo roa avy ao afovoany ho an'ny fitsaboana vonjimaika amin'ny Oblast ao Moskoa miasa eo amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny fotoana rehetra.
Ho fanampin'izany, ny mpandeha an-trano mandalo ireo terminal hafa dia entanina mba hanara-maso ny tobim-pahasalamana ao amin'ny terminal D, F, ary B, izay hanarahan'ny mpitsabo mahay azy ireo.
Sheremetyevo Airport dia nikarakara fampandrenesana feno momba ny mpandeha momba ny fomba hisorohana ny fiparitahan'ny COVID-19. Ny fanambarana am-peo dia ampitaina amin'ny alàlan'ny rafitry ny PA any amin'ireo terminal momba ny fepetra hisorohana ny COVID-19 ary koa momba ny fomba fitiliana azy io eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ireo mpandeha amin'ny faritra fitakiana entana rehetra dia ampandrenesina fa ny hafanany dia alaina amin'ny alàlan'ny sensor amin'ny hafanana lavitra any amin'ny seranam-piaramanidina. Ny fampahalalana vaovao momba ny tolo-kevitry ny Serivisy fanaraha-maso ny mpanjifa momba ny fomba hiadiana amin'ny COVID-19 dia entina amin'ireo birao fampahalalana rehetra sy amin'ny fampisehoana elektronika manerana ny seranam-piaramanidina.
Ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo dia mandray fepetra mbola tsy nisy toa azy mba hamantarana sy hisorohana ny fihanaky ny viriosy eo amin'ireo mpiasa ao aminy. Ny mpiasa rehetra maneho soritr'aretina gripa dia voarara amin'ny asa ary alefa mitokana avy hatrany, amin'ny fialan-tsasatra ary amin'ny quarantine. Ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo dia nametraka fameperana ny hetsika faobe sy ny besinimaro, ary ny fivoriana momba ny asa rehetra dia atao amin'ny endrika an-tserasera.
Sarontava fitsaboana 500,000 no novidina ho an'ny mpiasan'ny SIA JSC. Ny mpiasa rehetra tafiditra amin'ny fanomezana serivisy ho an'ny mpandeha dia omena fitaovam-piarovan-tena (sarontava sy fonon-tanana). Ireo mpanaparitaka famonoan-dronono aondrana dia napetraka amin'ny toerana ilaina rehetra ahafahan'ny mpiasa manasa tanana amin'ny fotoana rehetra. Ny mpiasa dia manara-maso matetika ny mari-pana amin'ny vatany amin'ny alàlan'ny sensor amin'ny hafanana mihetsika sy finday eny amin'ny terminal ary koa amin'ny tobim-pitsaboana rehetra ary amin'ny polyclinic an'ny Departemantan'ny fahasalamana sy ny fahadiovan'ny SIA JSC.
Ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo dia nanitatra ny ezaka amin'ny fandotoana ny toerana rehetra. Ny fepetra henjana indrindra dia napetraka ao amin'ny Terminal F, izay manompo sidina tonga avy any amin'ny firenena miaraka amin'ny tranga COVID-19 marobe. Ny fonosana manokana nopotserina tao anaty loto dia napetraka isaky ny tetezana jet ao amin'ny Terminal F. Ny toerana rehetra ao amin'ny seranam-piaramanidina dia manadio matetika miaraka amin'ny famoahana otrikaretina sy famonoana otrikaretina manokana, ary nitombo ny isan'ny fanadiovana rano sy famonoana otrikaretina.
Ny SIA JSC dia mikasa ny hanohy hampihatra ny fepetra rehetra mety ilaina mba hisorohana ny COVID-19 tsy hoentina Rosia ary avy amin'ny fielezana tany amin'ny firenena. Ny fepetra kendrena amin'ny fizahana ny mpandeha sy ny mpiasa ary amin'ny fanatsarana ny famonoana otrikaretina any amin'ny seranam-piaramanidina dia hitohy mandra-pahazoana baiko manokana avy amin'ny governemanta ny Rosia ary ny foiben'ny valin'ny vonjy maika ho fisorohana ny COVID-19 ao amin'ny faritanin'i Rosia.
* Toy ny Mar 19, 2020, ny firenena toy izany dia misy Shina, Iran, Korea, EU, Soeda, ny UK, Soisa, ny Emirà Arabo Mitambatra sy Etazonia.
Taratasy fampahalalana ho an'ny olona tonga Moscow avy amin'ny firenena manana tranga COVID-19 mitombo sy isa laharana telefaona finday dia hita ao amin'ny tranokalan'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo ao amin'ny faritra News for Passoters.
Niangavy ny mpizahatany eto amin'ny Nosy i Puerto Rico mba hanaja ny fanidiana ny tany
Ranomasim-pianakaviana CEO Arne Sorenson, CEO ao amin'ny Marriott International, rehefa nanao fanambarana sarotra indrindra hatrizay